जात्राको लागि २ दिन सार्वजनिक बिदा – List Khabar
Home / समाचार / जात्राको लागि २ दिन सार्वजनिक बिदा
जात्राको लागि २ दिन सार्वजनिक बिदा
बैतडी – जिल्लाको एक स्थानीय तहले जात्राको लागि २ दिन सार्वजनिक बिदा दिएको छ ।
मेलौली नगरपालिकाले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै आज बिहीबार र भोलि शुक्रबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको जानकारी गराएको हो ।
यस्तै, दशरथचन्द नगरपालिकाले पनि आज एक दिन सार्वजनिक दिने निर्णय गरेको छ ।
मेलौली नगरपालिका १ स्थित मेलौली भगवती मन्दिरमा दुई दिन बलिसहित भव्य जात्रा लाग्ने गर्दछ ।
धनी हुने मानिसको हातमा हुन्छ यस्तो रेखा ! जानी राखौँ …
एजेन्सी । हस्त रेखा विज्ञानले मानिसको सबै कुरा हातका रेखाले निर्धारण गर्ने बताउँछ । यी रेखा हाम्रो जन्मकै क्रममा बन्ने र यीनको प्रभाव जीवनभर रहने बताइन्छ । यहाँ हामीले धनी हुने ब्यक्तिका हातका रेखा कस्ता हुन्छन् भन्ने विषयमा चर्चा गरेका छौं।
हातको अनामिका औंलाको फेंदमा सूर्य पर्वत हुन्छ । सूर्यको सम्बन्ध राजनीतिक र सरकारी उच्च क्षेत्रसँग मानिन्छ । सूर्य रेखा सफा छ भने यस्ता ब्यक्ति सरकारी उच्च पदमा पुग्छन् । त्यसमा त्रिभुज समेत छ भने उनीहरुको प्रभाव देशमा मात्र होइन विदेशमा समेत हुन्छ
Previous भोलि मंसिर २ गते बिहिबार , कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् भोलिको राशिफल !
Next विद्यालय र कलेज अनिश्चितकालका लागि बन्द